U fiirsasho ku saabsan Dabada Dheer iyo Warshadaha Muusikada | Martech Zone
U fiirsasho ku saabsan Tail Dheer iyo Warshadaha Muusikada
Wednesday, September 27, 2006 Arbaco, Juun 9, 2014 Douglas Karr
Waxaan la kulmay qaar ka mid ah Hogaamiyaasha Suuq geynta Indianapolis isbuucyo ka hor si aan ugala hadlo Dabada Dheer. Waa buug aad u fiican Chris Anderson waa qoraa cajiib ah.
Tan iyo markii buugga la qaybiyey, dadka qaarkiis waxay xoogaa tallaal ku qaadeen Chris iyo fekerka ah inuu si uun 'u hindisay' Dabada Dheer. Uma maleynayo in Chris uu alifay aragtida ah Dabada Dheer, laakiin si qurux badan ayuu ugu sawiray.
Qadadeenna, sida ay dadweynuhu uga wada hadlayeen buugga, waxaan u maleynayaa in dhowrkeen aan u nimid garashada taas Dabada Dheer ayaa ah geedi socod lama huraan ah sida warshadaha kale oo kale. Waxaa jiri jiray oo kaliya dhowr shirkadood oo gawaarida sameeya, xoogaa brewerers, xoogaa soo saarayaasha korantada… laakiin waqti dheeri ah sida farsamooyinka wax loo qeybiyo iyo waxsoosaarka ay isbeddeleen, waxtarka ayaa sii kordhayay. Dabada Dheer waxay u egtahay a Sharciga Moore soosaarka iyo qaybinta.
Waxaan u maleynayaa in warshadaha sida muuqata ay ku dhacday tani ay tahay warshadaha muusikada. Konton sano ka hor, waxaa jiray istuudiyaha faro ku tiriska ah iyo calaamado kooban oo rikoodh ah oo go'aamin jiray cidda sameysay iyo kuwa aan sameyn. Kadib, idaacaduhu waxay go'aansadeen waxa la ciyaaray iyo wixii aan ahayn. Iyadoo aan loo eegin xulashada macaamiisha, soo saarista iyo qaybinta muusiggu aad iyo aad ayuu u koobnaa.
Hadda, waa wax fudud. My uu curiyaa, qoraa, riwaayadaha, diiwaangeliyaa, isku daraa, oo ku qaybiyaa muusikada qiimo jaban iyada oo loo marayo degelkiisa. Ma jiro qof u dhexeeya isaga iyo macaamilka… cidina ma jirto. Ma jiro qof u sheegaya inuusan heli karin heshiis rikoodh ah, cid ku dallaceysa inuu duubo CD, ma jiro qof u sheegaya inaysan muusikadiisa ciyaari doonin. Ninka dhexe xalka ayaa laga jaray!
Taasi waa wax laga xumaado ninka dhexe, laakiin waxaa jira khadad aan dhammaad lahayn oo dad ah oo 'laga gooyay' qaybinta iyo waxsoosaarka maadaama qaababku noqdeen kuwo aan qaali ahayn oo waxtar badan. Waa isbeddel dabiici ah. Dhibaatada ka jirta warshadaha muusikada ayaa ah inay jirtay so lacag badan oo udhaxeysa macaamilka iyo muusikiiste. Waxaa jira milyaneero badan oo ka tirsan warshadaha oo aniga iyo adiga aanaan waligeen maqal.
Marka… ka waran haddii muusikiiste weyn uu sameeyo $ 75ka sanadkii? Ka waran hadday haystaan ​​401k, oo ay ahayd inay toddobaad walba shaqeeyaan si ay guriga u keenaan hilibka doofaarka, waa inay shaqo ka raadsadaan halkan iyo halkaas… taasi waa wax aad u xun? Uma maleynayo sidaas. Waan aqaan mashiinada farshaxanka leh lathe - shaqadoodu marwalba way fiicantahay… waligoodna ma aysan sameynin wax kabadan $ 60ka sano. Muxuu muusikiiste uga qiimo badan yahay mishiinka? Labaduba waxay ka shaqeeyeen noloshooda oo dhan iyaga tahay. Labadooduba waxay gaadheen heer dhammaystiran oo helay dareenka iyo xushmadda kuwa hareerahooda ah. Muxuu midkood malaayiin u helayaa kan kalena nolol adag ku helayaa?
Kuwani waa su'aalo loo baahan yahay in miyuusigga miyuusiggu la heshiiyo. Awoodda lagu wadaago muusikada iyadoo loo marayo teknolojiyadda ayaa mar walba horseedi doonta maareynta xuquuqda dhijitaalka iyo tikniyoolajiyadda Jiilka soo socda ee Nidaamyada Hawlgalka, Ragga Rasmiga ah, iwm. Waxay lahaan doonaan facooda saafiga ah ee wadaagga asxaabta ee aan u garbin doonin nin dhexe oo dacwayn kara. Waan furi doonaa Joe iyo Joe ayaa ila wadaagi doona hees - aniga oo aan adeeg u dhexayn.
Warshadaha RIAA iyo Muusikada waxay si fudud ula dagaallamayaan horumarka warshadaha. Waxay isku dayi karaan inay dheereystaan, laakiin wax faa'iido ah ma leh.
Calaamadaha Bulshada: Qari oo Raadi
Sep 29, 2006 at 7: 58 AM
“Muxuu mid ka mid ah u helayaa malaayiin kan kalena nolol ugu baahan yahay?”
Sababtoo ah inkasta oo aanan bixin doonin lacag fiican oo aan ku fariisto daawada mashiinka shaqada, waxaan naftayda u iibin lahaa tikidhada Rolling Stones.
Taasi waa sababta ay u kala duwan yihiin. Aniga, macaamilka, waxaan u qiimeeyaa si kala duwan.